Ugwadule lwase-Atacama lubonakala luqhakaza ngokuphelele | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ebusika obudlule, izimvula ezinamandla nezingalindelekile zabhaliswa ezindaweni ezisenyakatho neChile. Lokhu kudale izinkulungwane zezitshalo ukuthi zichume ogwadule olomile nolushisa kakhulu emhlabeni, njenge-Atacama Desert.
Lesi yisimo esivamise ukuba nomjikelezo weminyaka emihlanu kuya kweyisikhombisa, kepha lokho iba yinto ephindaphindeka kakhulu ngenxa yobukhona besimo se I-El Niño. Kungenzeka kanjani ukuthi izinhlobo eziningi kangaka zezinhlobo zezilwane zikhule ehlane?
1 Isimo esingejwayelekile
2 Ukuvakasha kwe-Atacama
Lo mkhuba uheha izinkulungwane zezivakashi. Futhi ukuthi ukubona ugwadule olunenhlabathi egcwele ngokuphelele akuyona into ejwayelekile. Abanye ochwepheshe baveza ukuthi kulo nyaka ka-2017 kungabonakala izimbali ezinhle kakhulu emashumini eminyaka adlule uma kubhekwa ukuthi inani lemvula enyakatho livumele ukukhula kwezitshalo eziminyene impela nohlaza.
Ukuze ukuqhakaza kwaleli zinga kwenzeke, akumele nje line kuphela, kodwa futhi kufanele kukhuphuke kancane kancane amazinga okushisa entwasahlobo ukuze kungalimazi ukukhula nokuthuthuka kwezitshalo.
Izimvula ezaqoshwa ngenyanga kaMeyi esifundeni i-Atacama yizo eziholele ekutheni kuvele lo khaphethi onemibala eminingi. Ugwadule olunezimbali ngokungangabazeki lungenye yamakhadikhadi athakazelelwa kakhulu izivakashi eza ezindaweni ezisenyakatho kakhulu kulezi zinyanga, okukhangayo okungakaqondakali kahle futhi isayensi engakwazanga ukukuchaza ngokugcwele.
Lesi simo sibizwa ngabantu bendawo «isimangaliso sasehlane»Futhi isetshenziswa ngabathengisi nokunikezwa kwabavakashi ukukhuthaza amanye amasiko nezimpawu zensimu. Phakathi kwezindawo abangazinikeza kukhona amapaki kazwelonke, ulwandle lwamakristalu, izindawo zemvelo ezivikelekile kanye namathafa ephupho.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ugwadule lwase-Atacama lubonakala luqhakaza izimbali